निर्मला पन्तकी आमालाई अधिकारकर्मीको धम्की,गुपचुपमा सच्याईयो प्रतिवेदन| Nepal Pati
निर्मला पन्त हत्याको आरोप लगाइएका बबिता बमले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालसहित ३ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि केही अधिकारकर्मीले निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तको घरमा गएर उनलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
निर्मलाको घरमा खिचिएको भिडियोको आधारमा संगठनका अध्यक्ष अर्याल, शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) अध्यक्ष बद्री भुसाल, सचिव पुष्ष पौडेल, स्थानीय महिला अधिकारकर्मी मिना भण्डारी, शारदा चन्द, लक्ष्मी मल्ल लगायतले निर्मलाकी आमा दुर्गालाई दबाब दिएका हुन् । एकपछि अर्को प्रश्न गर्दै अधिकारकर्मीले दुर्गादेवीलाई हैरान बनाएकाे भिडियाे सार्वजनिक भएकाे छ ।
दुर्गादेवीले निकै भावुक भएर भनेकी छिन् ‘कुन आमाको हुन्छ र गर्भबाट जन्मिएको छोरीको हत्यारा नपक्रियोस् भन्ने, बिहानै उठेर भगवानसँग न्यायको लागि, अपराध गर्नेलाई, लुकाउनेलाई कीरा परोस् भनेर माग्छु, । ७ महिनासम्म दौडधुप गर्दागर्दा म हैरान भए ।’ निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै ८ प्रहरीविरुद्ध अधिकारकर्मीहरुको पहलमा निर्मलाकी आमा र दीलिपसिंह विष्टका दाजु खड्ग विष्टलाई जाहेरी दिन लगाइएको थियो । सोही जाहेरी अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्मलाकी आमाले प्रहरीले लापरवाही गरेको तर प्रमाण नष्ट गरेको आफूलाई थाहा नभएको भन्दै जाहेरी सच्याउन खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरु भने अनुसार गर्न दबाब दिन पुगेका थिए ।
यस अघि निर्मलाको भेजिनल स्वाब हो कि हैन भनी एकिन गर्न निर्मलाकी आमाको रगत नमुना लिँदा पनि कान्छी श्रीमतीसँग केही वर्षदेखि नै अलग बसिरहेका उनका श्रीमानले घरमै आएर निर्मला आमालाई गाली गरेका थिए । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले राहतका लागि दिने भनेको रकम पनि श्रीमानले दिएको दबाबका कारण आमाले लिन सकेकी छैनन् ।
बबिता बमले नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन् । संगठनका अध्यक्ष अर्यालले नभएका कुराहरु सिलसिलाबद्ध रुपमा प्रकाशित प्रसारित गरेर आफूहरुको बेइज्जती गरेको, ब्यक्तिगत गोपनियता, मान प्रतिष्ठा र मानवीय मर्यादाको अधिकारको समेत हनन् गरेको भन्दै बबिताले फागुन २३ गते मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् ।
पत्रकार खेम भण्डारी र भक्ति फुलारालाई पनि विपक्षी बनाइएको मुद्दामा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार ४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र मुद्दाको खर्चवापतको खर्च ९० हजार रुपैयाँ समेत भराउन आदेशको माग गरिएको छ ।
संगठनले गुपचुप सच्यायो प्रतिवेदन
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा स्थलगत अनुगमन गरेको गैरसरकारी संस्था नेपाल मानव अधिकार संगठन (ह्युरोन)ले आफ्नो स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदनका तथ्यहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना भएपछि गुपचुप सच्याएर पुरानै मिति राखी आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेको भेटिएको छ । ह्युरोनले गत असोज १० गतेको मिति राखी संगठनको स्थलगत अनुगमनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको बूँदा नम्बर २ मा ‘बम दिदीबहिनीमध्ये जेठी बबिता बम डान्सबारमा डान्सरको रुपमा कार्यरत छिन् र ‘घटना भएको दिन निज कार्यरत ओपेरा होटलमा एक बर्थ डे पार्टी भएको’ लेखिएको थियो ।
काठमाडौँको रिपोर्टर्स क्लबमा असोज १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा संगठनका महासचिव महामुनीश्वर आचार्यले सोही बूँदासहितको प्रतिवेदन पढी सुनाएका थिए । हाल संगठनको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिवेदनमा भने बबिता बम डान्सबारमा डान्सर भएको तथ्य हटाइएको छ । त्यसैगरी ‘घटना भएको दिन निज कार्यरत ओपेरा होटल’ लेखिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ‘घटना भएको दिन निज आवतजावत गर्ने भनिएको ओपेरा होटल’ बनाइएको छ । प्रतिवेदन सच्याइएको वा संशोधन गरिएको बारे कुनै पनि जानकारी त्यसमा राखिएको छैन् । सच्याउँदा समेत प्रतिवेदनको मिति पुरानै (असोज १०) नै राखिएको छ ।
यही प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यका आधारमा विभिन्न युट्युब च्यानल र वेबसाइटहरुमा समाचार सामाग्रीहरु बनेका थिए र पाठकहरुमाझ एक किसिमको विचार निर्माण भएको थियो । तर तथ्य नै गलत पर्ने गरी प्रतिवेदन संशोधन हुँदा भने सामान्य जानकारीसमेत कसैलाई दिइएको छैन । भीमदत्त–२ खोल्टीकी १३ वर्षिया निर्मालाको साउन ११ गते बलत्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो
निर्मला हत्याकाण्ड सेलाउँदै गइरहेको थियो । राज्यको महत्वपूर्ण अंग सरकारले समेत यो हत्याकाण्ड दबाउन भरपूर कोशिष गरिरहेको सर्वत्र अभुभूति भइरहेको थियो । हत्याकाण्डसँग जोडिएको पात्रहरु पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूलाइ महात्मा गान्धी दावी गरिरहेका थिए । सर्वत्र निराशा व्याप्त थियो, निर्मलाको बलात्कारपछिका भएको हत्याले नेपालको अदालती प्रणालीमा प्रवेश नै नपाउने हो कि भन्ने व्यापक चिन्ता थियो । एक प्रकारले सिंगो समाज डिप्रेसनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, न्याय हराएको देश बन्न थालेको थियो नेपाल ।
गत साता नेपाल सरकारले निर्मला हत्याकाण्डको विषय अदालत लैजाने पहल गर्याे । हत्यारा अदालत लैजान नसके पनि सरकारी वकिल मार्फत हत्याकाण्डलाई अदालतमा लग्यो । निर्मला हत्याकाण्डका लगभग सबै प्रमाण मेटाउने र नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने प्रपञ्चमा सामेल भएका ८ प्रहरी अधिकारी विरुद्ध परेको जाहेरीलाई सत्य मान्दै सरकार स्वयमले ८ प्रहरीलाई अदालतमा अभियुक्तका रुपमा खडा गर्ने काम गरयो । आठ मध्ये ६ जना कानूनी दायरामा भए पनि तत्कालिन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट र केन्द्रीय जाँच ब्यूरोबाट खटिएका अंगुर जिसी फरार छन् । उनीहरुको फरारले थप आशंका फैदा गरेकाे छ । उनीहरुलाई बचाउन ठूलै कसरत हुन सक्ने सम्भावना छ । अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको प्रकरणमा सरकारको नियन्त्रण दाववमूलक हुन सक्दैन किनभने न्याय निरुपणको तहगत व्यवस्था छ ।
तत्कालिन एसपी विष्टसहितका आठ प्रहरीविरुद्ध प्रमाण मेटाएको अभियोग दर्ता, के होला त कानुनी कारबाही ?
अदालतमा तत्कालिन एसपी डिल्ली विष्टसहितका आठ प्रहरीविरुद्ध निर्मला हत्याकाण्डका प्रमाण मेटाएको अभियोग दर्ता भएको छ । सरकारले दर्ता गरेकाे अभियोगको प्रतिवाद गर्दै अभियुक्त पक्षका वकिलहरुले नष्ट भएका प्रमाण ‘मानवीय त्रुटी’ भएको दलिल पेश गर्ने सम्भाना छ । मानवीय त्रुटीका कारण एक दुईटा त्रुटी हुन सक्छन् तर निर्मला हत्याकाण्डमा चाहिने जति सबै प्रमाण कि नष्ट छन् कि विकृत त्यो काम प्रहरीबाट मात्रै भएको छ ।
प्रहरी पेसामा तीन दशक बिताएर सेवानिवृत्त हुन लागेका तत्कालिन एसपी डिल्ली बिष्ट र उनको टिमले एक दुईवटा गल्ती गरेको भए सामान्य मान्न सकिन्थे तर हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा आवश्यक शतप्रतिशत प्रमाण नष्ट हुने अवस्था उत्पन्न गराइयो । यसलाई कसरी सामान्य मानवीय त्रुटी भन्न मिल्छ र पेशाको हिसाबले भेटेरान मानिएका अधिकारीहरुबाट लगभग सबै प्रमाण नष्ट हुने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने मूल प्रश्नमा अभियुक्तहरुका वकिलहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड भएकै दिन अर्थात १० साउनदेखि नै प्रहरीकै अग्रसरतामा प्रमाण मेटाउने काम भएको छ । र, यो काण्डमा अदालती तथा फरेन्सिक हिसाबले आवश्यक एउटा पनि प्रमाण साबुत राखिएको छैन । प्रहरीकै दायित्वमा रहे पनि ती सबै प्रमाण कि नष्ट भएका छन् ।
निर्मला हत्या प्रकरणको घटना क्रम
३– ११ साउनमा स्थानीयले साइकल र कापीकिताब पाएको खबर गरेको एक घण्टापछि मात्रै प्रहरी घटनास्थल पुग्यो । र, घटनास्थल उखुबारीमा खोजतलासका लागि बाटो हिंड्र्दै गरेका मान्छेलाई समेत लगेर घटनास्थल क्षतविक्षत बनाइयो ।
४–लास पाइएपछि निर्मलाको शरीर धोईयो । उनको शरीरमा पाइने सक्ने बलात्कारीका रौं, बीर्य र अन्य प्रमाण धोएर फ्याँकियो ।
पछि के भयो त ,
२०– वडा प्रहरी कार्यालयको मातहतको क्षेत्रमा १० साउनदेखि नै इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीका इन्चार्जलाई चलखेल गर्न लगाइयो । सिआइबीको सहजकर्ताका रुपमा पनि उनैलाई नियुक्त गरियो । अंगुर जिसीलाई उनै सईको इण्डियन प्लेटको कारमा घुमाइयो र पाहुनाको जस्तै सत्कार गरियो ।
२१– घटनास्थलमा कुकुर परिचालन गर्न सकिने अवस्था नभिजेका कापीकिताब र अम्बाको पोलिथिन भए पनि कुकुर परिचालन गरिएन ।
२२– दिलिप विष्टलाई अपराधी बनाउन ठूलै कसरत गरेपनि प्रहरी सफल भएन् ।
२९– भेजाइनल स्वाबबाट डिएनएको नमुना उल्टो लिइउको प्रमाणित भए पनि त्यसलाई सुल्टो पार्ने काम अहिलेसम्म थालिएको छैन ।
३५– डिल्ली विष्टले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न भाषणवाजी त गरे तर वर्खास्ती विरुद्ध कुनै कानुनी उपचारको बाटो हिंडेनन् ।
सरकारले दबाउन खोजेकै हो त निर्मला हत्या काण्ड ?
निर्मला हत्याकाण्ड पछि देशकै प्रधानमन्त्रीले मिडीमा गलत कुरा बोल्नु , गृहमन्त्रीले संसदमै निर्दोष ब्यक्तीअपराधी हुन भनेर बोल्नु कत्तीको जायज हो त ? प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धान विवादमा तानिए पछि गृह र प्रहरी प्रशासनबाट विभिन्न टोलि खटाईए । प्रहरी माथी लागेका आक्षेप मेटाउन प्रहरी महानिरीक्षक स्वयम् घटना स्थल र पिडीतसमक्ष पुगे ।
देशकै मन्त्री ,जनप्रतिनिधी तथा उच्च बिशिष्ट व्यक्ती गोहिका आँशु बगाउन निर्मलाको आमालाई भेटेर न्याय को आसबाहेक केही पाईनन् । अपराध र अपराधी सबैका साझा दुश्मन हुन् तर तत्कालिन प्रहरी प्रमुख बिष्ट ले बचाउन खोजेको भन्ने स्थानियको भनाई छ । सरकारले २ जना प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर घटनालाई दबाउन त खोजिएको होईन भन्ने सबैको आशंकाकाे जन्म भएकाे छ । सरकार माथि लागेका आरोपहरु निर्दाेष सावित गर्न सत्य तथ्य र वस्तुगत धरातलमा आधारित अनुसन्धान गरि दोषीलाई कानूनी कटघरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।